အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တီချမ်း အကြောင်းတစေ့တစောင်း.....
Posted by တီချမ်း at 12:13 AM
Anonymous March 30, 2009 at 12:58 AM
တီတီ... တီ့ပုံတွေ့လို့ မအိပ်ခင်လေး ၀င်လာကြည့်တာ။ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးထားတယ်။ ဘာသာပြန်ထားတာ ကျတော့ ရေးပေးဘူး... နက်ဖြန်တော့ Dictionary စာအုပ်လှန်ပြီး ဖတ်ရမလိုပဲ...း)
khin oo may March 30, 2009 at 1:09 AM
သေချာဖတ်သွားပါတယ။် လေးစားပါတယ။် အဆင်ပြေချမ်းမြေ့ပါစေ. လုပ်ငန်းလည်းဆက်လက် အကျိူးပြူနိုင်ပါစေ။
Heartmuseum March 30, 2009 at 1:32 AM
ဗျို့ တီချမ်း... ဒီ blog ကို မခင်ဦးမေဆီက တဆင့် မကြာမကြာ ရောက်တတ်ပေမယ့် အခုမှ ပထမဆုံး comment ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကို ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးရဲတာကို ချီးကျူးမိပါရဲ့။
ခင်ဗျား အခုလို လောကကြီးကို အရှုံးမပေးပဲ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို တတ်နိူင်သလောက်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ သိရလို့ လေးစားမိပါရဲ့။
ကျွန်တော်အသိ တော်တော်ခင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းနေဖက် ငယ်သူငယ်ချင်း တယောက်ကတော့ ဒီရောဂါရှိကြောင်း သိရပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်တော့်ကို လာကန်တော့ ငိုပြီးပြောရင်း နောင်ရက်တွေမှာ ကျွန်တော်ကိုတောင် အတွေ့မခံတော့ပဲ တနေရာသွား ဇာတ်မြှုပ်နေရင်း လောကကြီးကို အရှုံးပေးစွန့်ခွာသွားလေရဲ့။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ငွေရေးကြေးရေး အဆင်မပြေလို့ သူ့ကျောင်းစားရိတ်ကို ကျွန်တော်နဲ့အဖွဲ့က ထောက်ပံ့ခဲ့တာလေ။ ကျွန်တော်တို့လဲ ချမ်းသာလို့မဟုတ် လူတော်တယောက်ကို ပညာတတ်တော့ ဖြစ်စေချင်တယ်လေဗျာ။ ဒီလိုလူတွေကို စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ဖို့ ခင်ဗျားလိုလူ များများလိုတယ်လေ။ အခုတော့ သူလဲ လောကကြီးမှာ မရှိတော့ပါဘူးလေ။ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို ဆတက်ထမ်းပိုး လုပ်နိူင်ပါစေဗျာ လို့ ဆန္ဒပြုရင်း.....
ဖိုးစိန် March 30, 2009 at 2:46 AM
ပြောချင်သေးတယ် ချမ်းရယ်.. ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုဆို့ နစ်ထားသလို ပဲ..
Phyo Maw March 30, 2009 at 7:15 AM
အားရစရာပါ။ တကယ်ကို အားရစရာပါ။
မိုးခါး March 30, 2009 at 7:26 AM
တီချမ်း .. တကယ်လေးစားတယ် .. တီချမ်း လုပ်ငန်းတွေ ဆထက်ထမ်းပိုး အောင်မြင်ပါစေ ..း))
Ei Ei Khin March 30, 2009 at 8:25 AM
Anonymous March 30, 2009 at 8:32 AM
တီတီရေ... အရမ်းကို လေးစားသွားတယ်။ အမြဲလည်း အားပေးနေမယ်။ ဘာမှ အားငယ်နဲ့နော်... စိတ်မပျော်ရင် ဘာမှ လုပ်လို့ကောင်းဖူးလေ... အမြဲတမ်း ဘလော့ဂ်နိုင်ပါစေနော်။ တီတီ ပျော်ရွှင်ချမ်းပြေ့ပါစေရှင့်...
နွေးနေခြည် March 30, 2009 at 8:47 AM
တီချမ်းကို လေးစားကျေနပ်မိပါတယ်။ ကြိုးစားပါတီချမ်းရယ်... အဝေးက စကားလုံးတွေနဲ့ အားပေးနေပါ့မယ်
သဇင်ဏီ March 30, 2009 at 10:44 AM
တစ်ကယ်ပဲပေ့ါ... ဖတ်ပြီးတော့ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်တီတီရယ်..
ဘာတွေတုန်း March 30, 2009 at 11:42 AM
တီချမ်းရေ.. တီရဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကို တအားလေးစားသွားပြီ။ အမြဲ အားပေးနေပါတယ်နော်.. တီချမ်း ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Rita March 30, 2009 at 11:48 AM
ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ မသိဘူး။ ဖတ်ပြီး ကျေးဇူးလဲတင်သွားပါတယ်။ Addy ကိုလဲ ချီးကျူးမိတယ်။
Addy က တော်တဲ့လူ၊ အကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူ လို့ ခံစားမိပါတယ်။
sin dan lar March 30, 2009 at 11:49 AM
ပရိုဖိုင်းကပုံထက် ခုတင်ထားတဲ့ပုံက ပိုလှတယ်..(ငယ်ငယ်တုံးကပုံမို့များလား... :P:P)
sin dan lar March 30, 2009 at 11:55 AM
sweetpeony March 30, 2009 at 1:02 PM
Phyo Evergreen March 30, 2009 at 1:31 PM
တီချမ်းကြီး ဖတ်ပြီးမျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်.. အိုင်အမ်တပ်ခ်ျထ်.(I'm touched)။ to fight for my rights ဆိုတဲ့စကားလေတစ်ခွန်းကြိုက်တယ်.. စွဲသွားတယ်..။ တီချမ်း ဆက်လက်ပြီးသတ္တိခွန်အားတွေတိုးပွားပါစေဗျာ..။ အောင်နိုင်သူအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ပါစေဗျာ..။
၀ါဝါမောင် March 30, 2009 at 2:50 PM
ကျမကလည်း အမျိုးသမီးလား၊အမျိုးသားလားဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား
မသိခဲ့တာနဲ့ အလည်လာပေမယ့် နှုတ်ဆက်ဖို့ ခက်နေခဲ့တာပါ..
အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်စွာနဲ့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ.
ဖိုးဂျယ် March 30, 2009 at 5:43 PM
အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက် လုပ်ကိုင် နိုင်ပါစေ တီချမ်းရေ
GreenGirl March 30, 2009 at 7:35 PM
လောကကြီးကို အရှုံးမပေးပဲ အကျိုးပြုနိုင်သလောက် ပြုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ တကယ်လေးစားသွားပါတယ်...
mgnge March 30, 2009 at 7:51 PM
တီချမ်း အစ ကတည်း ကဒီအြေ ကာင်းတွေ ကျွန်တော့ကို ပေးဖတ်ဖူးတယ်နော်..။
ကျွန်တော် ကတော့ခင်မင်လျက်အား ပေးလျက်ပါပဲ ...။
မေ့သမီး March 30, 2009 at 9:37 PM
တီရေ ညီမဂျပန်နိုင်ငံက ယူဟိန်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း ဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်။ သွေးမသန့်တဲ့ဝေဒနာကြောင့် ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သွေးသွင်းလိုက်ရပြီး အဲဒီသွေးထဲမှာ HIV ပိုးပါလာတာလေ။ သူရှိနေသေးလား မသိရပေမယ့် ညီမသူ့biography ကိုဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာ သူ့အသက် ၂၄နှစ်ရှိနေပါပြီ။ သူလည်း HIV/ AIDS ရှိနေတဲ့လူတွေကို ကူညီတယ်။ နောက်သူ့လို အမေရိကကတင်ပို့တဲ့ ရောဂါပိုးရှိတဲ့သွေးသွင်းမိတဲ့သူတွေအတွက် တရားစွဲတာတွေလုပ်တယ်။ ညီမအရမ်းလေးစားခဲ့တဲ့သူလေ။ အခုတီလည်း ညီမလေးစားတဲ့အထဲမှာ ပါသွားပြီ။ :D
deep appreciation !!! dear
သီဟသစ် March 30, 2009 at 10:49 PM
ဖတ်ပြီး တစ်မျိုးခံစားရပါတယ်။ လေးစားပါတယ် ဆိုတာထက် ပိုတဲ့စကားရှိရင် ပြောချင်ပါတယ်။
ရွှေပြည်သူ March 30, 2009 at 11:21 PM
ကျွန်မ သိပ်ကိုလေးစားမိပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ပါစေ။ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ဆထက်ထမ်းပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ...
မမသီရိ March 31, 2009 at 12:59 PM
Chan; you are really great!!!!
I really admire your positive view for your life.
I wish that your work will be benefited for you as well as others who are depressing due to HIV.
myo March 31, 2009 at 9:56 PM
ကောင်းကင်ပြာ April 1, 2009 at 7:51 PM
Anonymous April 1, 2009 at 8:45 PM
ဒီ post လေးကို အခုမှဖက်မိတာပါ။။။
Just Try the best...တီတီ..
Mae April 17, 2009 at 3:23 AM
I'm touched and heartened by your courage and your outlook in life. All the best to you, and i'll keep reading
pandora May 6, 2009 at 2:11 PM
တီချမ်းရေ... ဒီပို့စ်လေးကို ကျော်ဖတ်သွားမိတယ်။ အခုမှ ပြန်လာဖတ်တယ်။ ဘ၀ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆက်ကျော်ဖြတ်နေတာကို လေးစားပါတယ်။
Thatonthu October 13, 2009 at 4:56 AM
အခုမှ ဒီဘလော့လေးကိုတွေ့လို့ လာလည်ရင်းနဲ့ တီချမ်းအကြောင်းကို သိရတာ.။လောကကြီးမှာ ဖြစ်လာတာမှန်သမျှကို အကောင်းစိတ်နဲ့တွေးပြီး နေထိုင်နေတဲ့အတွက် အရမ်းလေးစားတယ်..။သူများကိုလဲ ကူညီတဲ့အတွက် ချီးကြုးတယ်..။
Anonymous October 16, 2009 at 2:34 PM
I am really appreciate to read this post.
U r so smart and u know how to stay ur life .
Maung January 30, 2011 at 10:26 AM
Thanks millions Addy,Sometimes I feel Guilty for being involved in those silly and nasty things without permission from Testing.
Indeed, we need Pre and Post Test Counselling but it is very difficult especially in Myanmar ( its take time and need experts to deal with ), because we have lack of support and facilities.
I wish one day, we could participate well in those loop-holes areas in order to keep abreast with International Standards.
Still I am thinking of, how long will be my result is NR ( Non Reactive )....Why Not? I am one of the 6000 millions People, I can have this result NR to R...one day......Why Not?
You dont know me well but I am really impressed and appreciated what u do very well. Seeing is Believing, I am sure, you are one of my Role Models in my life, One inaMillion....Once in my life...I cant meet suchaperson again in my life....I Envy you..I Love you Addy .....
Good job! T Chan.
Kayz July 28, 2011 at 1:39 PM
I always read your post but never comment .
Always appreciate your attitude and courage.